Antananarivo renivohitra Harahi-maso amin’ny « caméra de surveillance » ny fako
“Anisan’ny laharam-pahamehan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny fanatsarana ny fifamoivoizana sy ny filaminam-bahoaka.
Dingana iray lehibe amin’izany no tanteraka androany, dia ny fanaovan-tsonia fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Orinasa VIGIE”, hoy ny ben’ny tanàna Atoa Naina Andriantsitohaina omaly 9 jona 2021. Afaka hisitraka ireo teknolojia avo lenta ny CUA amin’ny fisian’ny « caméra de surveillance », izay ahafahana manara-maso toerana maro toy ny lalan-dehibe sy ireo dabam-pako noho io fiaraha-miasa io, raha ny fanambarany. Mino isika fa hitondra vokatra ho an’ny mponina izao ezaka izao ary hanampy betsaka ireo tompon’andraikitra samihafa. Ny fiaraha-mientana no antoky ny fampandrosoana haingana sy maharitra ho an’ny Taànantsika, hoy ity ben’ny tanàna ity. Hafa indray ity tetikasa vaovao hoentin’ny CUA ity ka andrasana ny mety fahombiazana na koa ny lesoka. Efa maro mantsy izay zavatra nambara fa hatao sy hotanterahina eto amin’ny CUA izay.
Fonjan’Imerintsiatosika Manara-penitra lavitra noho ny oniversitem-panjakana
Sao dia tokony ampifanakalozana ny « cité universitaire » sy ny fonja manara-penitra, hoy ny fanontanian’ny mpampianatra mpikaroka iray nahita an-tsary ny ivelany sy atin’ny fonja
Ahiahina trafika teny Ivato Misy resaka manjavozavo ihany
Ritsoka avy any amina loharanom-baovao iray no ren’ny tompon’andraikitra teny amin’ny seranam-iaramanidina iraisam-pirenena Ivato ka nahatonga azy ireo naka fepetra hentitra hisava ireo mpandeha rehetra
Tsy nahaloa vola indray ny fanjakana Nalain’ny tompony ilay fiaramanidina CASA
Navoakan’ny fampahalalam-baovao Frantsay Le Monde fa nalain’ny orinasa Frantsay Sofema ny fiaramanidina Casa CN-235 novidian’ny Filoha Andry Rajoelina ny 2019.
Biby hafahafa any Vangaindrano Olona no lohany, kisoa ny vatany
Nisehoana tranga hafahafa tany amin’ny distrikan’i Vangaindrano omaly. Kisoa iray no fantatra fa niteraka olona ka tahaka ny olona mihitsy ny lohany.
Tra-doza tany amin’ny Oniversiten’Antsiranana Tsy tana ny ain’ilay tovovavy vao 18 taona
Nodimandry ilay tovovavy vao 18 taona monja antsoina hoe Elisah, izay nilatsahan' ny solaitrabe vita tamin’ny simenitra ny marainan'ny alatsinainy 13 septambra lasa teo tao amin’ny Oniversiten’Antsiranana.
Abel Anicet Hilalao ao amin’ny Levski Sofia
Araka vaovao mbola tsy ofisialy omaly, dia hijanona ao amin’ny fifaninanam-pirenena Divizionina voalohany (D1) any Bulgarie ny kapitenin’ny Barean’i Madagasikara Abel Anicet Andrianantenaina.